Akwa-ulo oru otutu umu ihe mgbochi ime B-45
B-45 Otito-ime akwa ime na akwa: 1800 (L) × 600 (W) × 650/895 (H) mm Etere ọtụtụ tebul na-egbochi imepụta, ite ime na nyocha ọria. Ejiri ya na ịrụ ọrụ dị mfe, akụ na ụba, nchekwa na ntụkwasị obi. Ọ bụ ihe eji akwa akwa, ihe ndina n’elu akwa na-ehi ụra. Ala dị larịị gụnyere mpaghara azụ, ngalaba oche yana ngalaba ụkwụ. A na - ejikwa ụkwụ aka na - arụ ọrụ nke na - agbadata na - agbatị na - aga azụ na - aga n'ihu na - ala azụ na - aga n'ihu.
Ekpo mkpuchi mkpuchi ime ime B-43-1
Nha: 1680mm (L) * 620mm (W) * 800mm (H) Isi ihe: 1. epoxy coated frame, polyurethane matraress akwa; 2.Three ngalaba, izu ike azụ (nke a na-agbazi na mmiri gas), ọrụ izu ike ikpere (usoro sistemụ gia) na-achịkwa; 3. legkwụ na-akwado ụkwụ abụọ, jiri otu ọkwá SS n'okpuru tebụl 4. Mee ala na-agba ụkwụ, ụkwụ nwere roba mkpọtụ 5. constructionrụ ọrụ na-azọ ụkwụ na - echekwa akụ.
Ihe nchara akwa mgbochi ime ulo-B-42-1
nha: 1680mm (L) * 600mm (W) * 800mm (H) Isi ihe: 1. igwe anaghị agba nchara, akwa akwa polyurethane; 2. Akụkụ atọ, izu ike azụ (nke a na-agbazi na mmiri gas), ọrụ izu ike ikpere (usoro sistemụ gia) na-achịkwa; 3. legkwụ na-akwado ụkwụ abụọ, jiri otu ọkwá SS n'okpuru tebụl 4. Mee ala na-agba ụkwụ, ụkwụ nwere roba mkpọtụ 5. constructionrụ ọrụ na-azọ ụkwụ na - echekwa akụ.
B-48 C1-Standard Configurations ○ ABS head board (1) ○ ABS n'akụkụ ụzọ gbara ya gharịị (2) ○ Motors (3) ○ supportskwụ na-akwado (2) ○ na-arụ ọrụ (2) holes oghere oghere (2) holes oghere osisi (2) ○ Okomoko etiti na-emechi emechi (4) ○ Okomoko mkpọchi mkpọchi （4）
B-48A1 Ime ụlọ LDR bụ otu ọnụ ụlọ maka ọrụ, nnyefe, mgbake, na postpartum (LDRP). Ngwa nke ihe ndina a dị mma maka usoro ịmụ nwa na usoro nnabata ọ bụla ma ewezuga kesesanis na nnyefe ihe na --ezu oke. Ezubere ụlọ ịnyefe nwa maka usoro izizi niile site n’ọmụmụ rue ọmụmụ nwa na nlekọta nwa, ma nwee ike ijikwa ọtụtụ nsogbu. Ihe ndina nke LDR, dika ihe isi ihe eji eme ihe n’otu ulo nwere ike idozi ya nke oma iji bunye ovu ma nyekwa oria di iche iche…